Utyalomali kunye neMveliso
Iworkshop kunye nezixhobo
Iqela leR & D
Izixhobo zeR & D
Iimoto zoMatshini wokuCoca
Iimoto zomatshini osebenza ngomthi kunye nesixhobo segadi
Iimoto zoMatshini oSebenzisa iAerodynamic
IiMotor zezicelo zeZithuthi
Iimoto zomnye uMatshini waMandla
Torque ePhakamileyo ePhakamileyo ye-16DCT Athlonix ™ iMoto encinci
ngomphathi ku 18-02-27
IPortescap yazisa ngenjini entsha ye-16DCT kuluhlu lwayo oluphezulu lwe-torque ye-DCT yee-Athlonix motors. Imoto ye-16DCT inokuhambisa i-torque eqhubekayo ukuya kuthi ga kwi-5.24 mNm kubude be-26mm kuphela. I-16DCT isebenzisa iimagnethi ezinamandla zeNeodymium kunye nePortescap eqinisekisiweyo yoyilo olungenamandla olusisiseko. Ukulungiselela ...
Zisebenza njani izinto zokucoca?
Isicoci esithobekileyo sesinye sezona zixhobo zokucoca izindlu ezisetyenziswayo namhlanje. Uyilo lwayo olulula kodwa olusebenzayo luyisusile into yokuba kufuneka lucoce uthuli kunye namanye amasuntswana kwiindawo ezingaphezulu ngesandla, luze lucoce indlu ukuba ibe ngumsebenzi osebenza ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Ungasebenzisi nto bu ...
IMitsubishi Motors ikhumbula izithuthi ze-Outlander EX e China
IMitsubishi Motors izakukhumbula izithuthi ezingama-54,672 e-China ezineengxaki zokucima iwindows. Isikhumbuzo, esiqala nge-27 kaJulayi, sesenzelwa ukungenisa iimoto zangaphandle kwe-Outlander EX phakathi kuka-Novemba 23, 2006 no-Septemba 27, 2012, ngokwe-General Administration of Quality Supervision, Inspection kunye ...
Ukutyhilwa kwezona zincinci zincinci zibalulekileyo emhlabeni
Ii-motors ze-Piezoelectric ultrasonic zinezibonelelo ezibini ezibalulekileyo, ezizezi amandla abo aphezulu kunye nolwakhiwo olulula, olubangela igalelo kwiminiaturization yabo. Siye sakha iprototype encinci ye-ultrasonic motor isebenzisa istator esinomthamo omalunga ne-cubic millimeter enye. Umntu wethu wangaphambili ...
Ingxelo yeShishini leMicromotor yeHlabathi kunye neChina, 2016-2020
Iziphumo zomhlaba ze-micromotor zime kwiiyunithi ezili-17.5 zezigidigidi ngo-2015, ukonyuka konyaka-nge-4.8%. Ngombulelo kumaphulo okuphucula ishishini kunye nezixhobo, imveliso kulindeleke ukuba inyuke iye kwiiyunithi ezingama-18.4 yezigidigidi ngo-2016 kwaye ifike kwiiyunithi ezingama-23 ezigidi ngo-2020. ITshayina, eyona mveliso inkulu ...
Umnxeba:+86 535 8612516
Kwitekhnoloji okanye emva kwentengiso